Ukuphupha kwabazali ▷ Discover Discover online ▷ ➡️
Abazali ngokwabo badlala indima ephambili kubomi babantu abaninzi. Ngokusemandleni abo, abazali banika amandla nenkxaso emntwaneni wabo, ngabona banonopheli babalulekileyo ebomini bakhe iminyaka emininzi, kwaye bayathandwa kwaye bayathandwa ngenxa yayo. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, ubudlelwane nabazali ngokwabo abuye buhle, kuba bunokugcwala ziimpikiswano okanye ukuphoxeka, umzekelo, okanye umnxeba unokwaphuka ngokupheleleyo.
Kuba abazali babaluleke kakhulu kubomi bokwenyani, akuqhelekanga ukuba bavele nakumaphupha abantu abaninzi. Iimeko zinokwahluka apha njengoko iimvakalelo zivakala zinokwahluka. Kodwa luphawu "lwabazali" olunokuchazwa njani? Uthini malunga nephupha kunye nobudlelwane bakhe bokwenyani nabazali bakhe?
Abaphuphi abaninzi babalisa iimeko ngelixa belele apho babone khona, umzekelo, abazali babo abaswelekileyo. Sithanda ukuqala ngokuhlalutya eli phupha kunye nelabazali abaqhawule umtshato:
1 Isimboli yephupha «Abazali» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Baqhawule umtshato! Ukuphupha ukwahlukana nabazali
1.2 Abazali bakho abaswelekileyo bakubona kwilizwe lamaphupha
2 Uphawu lwephupha «abazali» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «abazali» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «abazali» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «Abazali» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Baqhawule umtshato! Ukuphupha ukwahlukana nabazali
Imeko yephupha lokwahlulwa komzali ngokubanzi itolikwa njengomboniso wenkxalabo yangaphakathi. Kule meko, ibhekisa kwimpikiswano phakathi kwabazali, ethi, nangona kunjalo, ingakhokeleli kukwahlukana ngokwenyani. Iphupha elinje kufuneka lisetyenziswe njengethuba lokuthetha ngokukhululekileyo kunye nabo nokusombulula ukungangqinelani okukhoyo ngoku.
Iphupha labazali abaqhawule umtshato ngokwabo, apho umntu owayesakuba ngumyeni kunye nowayesakuba ngumfazi, kwaye mhlawumbi nawe njengomntwana, uhlala ebonisa isidingo sokukhuselwa kokulala. Ke ngoko, ukwahlula iphupha lakho kunokubonisa ukuba umhambi ophuphayo kufuneka azimele ngakumbi.
Abazali bakho abaswelekileyo bakubona kwilizwe lamaphupha
Kukho abantu abonwabileyo ukudibana nabazali babo ephupheni, sele beswelekile ngokwenyani. Abanye baphupha besoyika kuba baziva ukufa yabazali bakhe abanothando basaphila ephupheni njengemangaliso. Wonke umntu kufuneka ajongane nokusweleka kwabazali bakhe, kungekudala okanye kamva. Nabani na osele eyenzile le nto kwi el mundo yamaphupha, nangona umama notata wakhe bephila kwaye bephilile, ujongene noloyiko lwakhe.
Uphawu lwephupha «abazali» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi yesimboli yephupha, abazali bahlala bebonisa oko ephupheni. ubudlelwane bokwenene kule ibonakalisiwe. Oku kuhlala kunxulunyaniswa nothando olunzulu kunye nemvakalelo yokunqabiseka. Kungenzeka ukuba umntu ochaphazelekayo okwangoku ukwinqanaba elinzima ebomini bakhe okanye unoluvo lokuba imvisiswano kufuneka ibuyiselwe kusapho alusekeleyo. Kule meko, i-subconscious yakho ikukhumbuza ngeenkumbulo ezintle ezivela ebuntwaneni bakho kunye nomnqweno wakho wokufuna uncedo.
Oku kuyasebenza ukuba abazali bephupha sele beswelekile ebomini bokuvuka. Nangona kunjalo, okuchaseneyo kuyasebenza ukuba umntu ekubhekiswa kuye waqonda kakubi ubuntwana bakhe kwikhaya labazali: kule meko, eli phupha libonisa ukuzikhusela kwiingcebiso kunye noncedo oluvela kwabanye abantu.
Nabani na ophupha ngokushiywa ngabazali bakhe, ngokoluvo ngokubanzi, unokukuqonda njengophawu lokuba uyabakhathalela abakhe. ikamva lezemali amaxhala. Ukuba abazali babuya ephupheni, le nkxalabo mhlawumbi ayinasiseko. Nangona kunjalo, ukuba ishiywe yodwa, umntu ophuphayo kufuneka azame ukucinga kwakhona ngemeko yakhe yezemali kwaye alungiselele ilahleko.
Ukuba abafazi baphupha ngooyise, unokuqina kwelinye icala. Conectividad y uthando yivakalise. Kwangelo xesha, la maphupha akwanesicelo sokujongana ngakumbi nelakho icala lobudoda. Okuchasene kwenzeka xa amadoda ephupha ngoonina.
Ukongeza, iimeko ezahlukeneyo zamaphupha kunye nabazali zichazwa ngolu hlobo lulandelayo:
Abazali njengabachasi: umphuphi ufuna ukwahlukana nabazali bakhe
Ukubukela abazali besifa: ubudlelwane kunye nabo bulawulwa kubomi bokwenyani yimilo kunye neembambano ezingasonjululwanga
Ubuxoki kubazali: iphupha kubomi bokwenyani kumqolo wentengiselwano yeshishini
ukuxokiswa ngabazali: ukuphupha uziva ushiyiwe kwaye uwedwa kwindawo yakho yentlalo
ukukhalimela abazali: ukunceda, ukuphulukana nolawulo
kusiwa kwikhaya labantwana ngabazali: iingxaki kubudlelwane phakathi kwabazali nabantwana
jonga umama ekhala: isibhengezo seengxaki
Umzali olungileyo: isibonakaliso sokungoneliseki okwaneleyo, ukungazinzi
Ukulwa nabazali: isilumkiso sempikiswano ozenzele yona.
Uphawu lwephupha «abazali» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwendlela yokutolika kwengqondo, kucingelwa ukuba ngokubonakala kwabazali ngokwabo ephupheni i ubudlelwane bokwenene iqhutywa kwezi. Abanye oochwephesha bengqondo babona umzobo katata njengophawu lwejaji zokuziphatha yokuphupha.
Ukongeza kwisazela sokuziphatha, utata ukwamele amandla kunye nobunkokeli. Umama, kwelinye icala, ufuzisela amandla amakhulu e Ubudlelwane bukamama nomntwana. Yimbonakaliso yokhuseleko kunye nokufudumala ngokweemvakalelo.
Ukongeza, ukubonakala kukamama ephupheni kunokubonwa njengesalathiso esivela kwi-subconscious: iphupha lilangazelela inkululeko engakumbi nokuzimela.
Uphawu lwephupha «abazali» - ukutolika kokomoya
Kwinkcazo yamaphupha okomoya, abazali banokubonwa njengophawu lokhuseleko. La maphupha kufuneka anike umntu ochaphazelekayo Ubulungu kwaye ingqiqo yoluntu kwiqela labo lokomoya iyacaciswa.